မပြောင်းလဲဘာ ဆေး၊လူနာ still | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » မပြောင်းလဲဘာ ဆေး၊လူနာ still
မပြောင်းလဲဘာ ဆေး၊လူနာ still
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 18, 2012 in Opinions & Discussion | 14 comments
ဆေးမသောက်မှီနဲ့ ဆေးသောက်ပီးဆိုပြီး အခြေအနေကွာပုံ နှိုင်းယှဉ်ဒဲ့ စဂါးရှိဒယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာလည်း ၁၉၈၈ခုနှစ်ကစလို့ ဆေးသုံးကြိမ် တိုက်ခဲ့ပြီးသွားဘီ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၂ ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အဆင့်အတန်းဒွေဂ တရုတ်ဆေးအဆင့်ရှိဒယ်၊ ၂၀၁၀ရွေးဂေါက်ပွဲဂဒေါ့ အများသိဒဲ့အတိုင်း အင်ဂျီး..။ ဒီဒေါ့ သိပ်မဆိုးဒဲ့ ဆေးနှစ်ကြိမ်သောက်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ဂဲ့ဒဲ့ ကိုယ်ခံအားနဲ့စပ်လျဉ်းလို့ ခံဈားမိဒါလေးဂို ဝေမျှဂျင်ဒယ်။ အတိုက်အခံပါတီ အန်အယ်လ်ဒီရော အာနာရပါတီ ကြံ့ဖွတ်တွေပါ အောက်ခြေရပ်ကျေးများအထိဆင်းပြီး ပါတီစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေဂျဘီ။ မဖြစ်မနေရှိရမည့် ရွေးကောက်ပွဲအင်္ဂါရပ်များအား အနိမ့်ဆုံး ပြည့်မှီဂဲ့ဒဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုဂို ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်ရင် ပြည်သူအများရဲ့ နိုင်ငံရေးရေဂျိန်ဂို တွေ့နိုင်ဒယ်။ မိတ်ဆွေများမှာ ပိုမိုတိကျခိုင်မာဒဲ့ အချက်အလက်များရှိဘာဂ ထောက်ပြဝေဖန် ဆွေးနွေးပေးဂျဘာ။
နိုင်ငံရေးဂေါင်းဆောင်မှု ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းအပေါ် မဲဆန္ဒရှင် သဘောထား ပြောင်းလဲမှု သိပ်မရှိသေးဘူး။ ဘာတခုမှ ဖြစ်မြောက်အောင် မလုပ်နိုင်ဒဲ့ စစ်တပ်ကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ (ကျုပ်တို့ အတိုက်အခံဒွေဂ ဒင်းတို့ထက် ပိုသောက်သုံးမကျလို့သာ..) ကျနော့်မှာ စာရင်းအချက်အလက် အတိအကျ မရှိဘူး။ လက်တမ်းပြောရရင် ၁၉၉၀ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ် မဲရလဒ် သိပ်ကွာခြားမှု မရှိဘာ။ နှစ်ပွဲစလုံး အန်အယ်လ်ဒီ တခဲနက်နိုင်ဒယ်။ ပထမပွဲမှာ အမတ်နေရာ ၃၉၂ – ၃၉၆ (အဖွဲ့ချုပ်၊ ပါတီ၊ မျိုးချစ်ရဲဘော်) နဲ့ ၈၂%ကျော် အနိုင်ရဂဲ့သလို ဒုတိယပွဲမှာလည်း ၄၃နေရာ ၉၅%ကျော် အနိုင်ရဒယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုစလုံး ကြုံဂဲ့ဒဲ့ဖိနှိပ်မှုများ သိပ်မပြင်းထန်လို့ ပြည်သူလူထုအားနဲ့ ကျော်လွှားနိုင်ဂဲ့ဒယ်။ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်ဗိုလ်ဂျုပ်များ ဖြစ်စေဂျင်ဒါ တစညနိုင်ဘို့၊ ထင်သလို ဖြစ်မလာဘူး၊ အန်အယ်လ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် အစောပိုင်း ခန့်မှန်းဒေါ့ နေရာ၂၅၀လောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောဂဲ့ဒယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဂျားဖြတ်ပွဲ အစောပိုင်းမှာလည်း ၃၀လောက်လို့ ခန့်မှန်းဗျန်ဒယ်။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ ခြုံကြည့်ရင် အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ လွှတ်တော်နေရာ အချိုးအစား မပြောင်းလဲသေးလို့ မြင်လို့ရဒယ်။ ဒါဂ လွှတ်တော် နေရာ… မဲလာပေးသူ ဦးရေကျဗျန်တော့လည်း သိပ်မကွာဘူး ထင်ဒယ်။ မှတ်မိသလောက် ၁၉၉၀ခုနှစ်ပွဲမှာ မဲပေးသူ ဆယ်သန်းကျော်ရှိဒယ်ဆိုလား (သန်း၂၀ဆိုလား မသေချာပါ)။ မဲပြားစုစုပေါင်း အရေအတွက်မှာလည်း အန်အယ်လ်ဒီပထမ၊ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပြု တစညပါတီဂ မဲသန်းချီဒဲ့ အရေအတွက်နဲ့ ဒုတိယ ဖြစ်ပါဒယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲလို နိုင်ငံရေးပုံစံတူ ၂၀၁၂ဂျားဖြတ်ပွဲကြတော့ စုစုပေါင်းမဲအရေအတွက် မနည်းလှဒဲ့ ဒုတိယနေရာဂို အာဏရပါတီ ကြံဖွတ်ယူသွားဘီ။
နှစ်ပွဲစလုံးမှာ ဒေါ်စုမျက်နှာနဲ့ နေရာဒိုင်းလိုလို ဒုတိယလိုက်သူထက် သုံးချိုးတချိုး၊ နှစ်ချိုးတချိုးနဲ့ အနိုင်ရဒယ်။ ဒုတိယသမား လူပြောင်းသွားပေမဲ့ မဲရရှိမှုအရေအတွက်ကတော့ မပြောင်းလဲထင်ဘာဒယ်။ ယခင်အာဏာရ မဆလပါတီ တဖြစ်လဲ တစညပါတီ ၂၀၁၀ ရွေးဂေါက်ပွဲအထိ အဲဒီအနေအထား ရဂဲ့ဒယ်။ ဂျားဖြတ်ပွဲမတိုင်ဂင် တစညပါတီ ပြောရေဆိုဂွင့်ရှိသူနဲ့ မီဒီယာတခု တွေ့ဆုံဒဲ့အခါ ၂၀၁၀ပွဲမှာ မဲစုစုပေါင်း ဆယ်သန်းနီးပါးရဂဲ့လို့ အခြေအနေကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဂဲ့ဒယ်။ ပိုပိုသာသာ ပြောဒါဖြစ်ပေမဲ့ အလဲအကွဲဒေါ့ ထင်ဂဲ့ဟန်မတူ။ ဒါပေမဲ့ သူ့အရင်နေရာဂို ကြံ့ဖွတ်တွေယူသွားဒယ်။ တစည ရှုံးလိုက်တာမှ ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေလို့.. ဖွတ်တက်အနင်း ခံလိုက်ရဒယ်။ ၁၉၉၀ပွဲမှာ အခြားအင်အားကြီး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီများ သုံးလေးခုရှိဒယ်.. ဦးနု ဒီငြိမ်းပါတီ၊ ဦးအောင်ကြီး ပြည်ထောင်စုဒီချုပ်၊ ဗိုလ်မှူးအောင် ဦးသုဝေ ဒီမိုကရေစီပါတီ..သူတို့ အပြတ်အသတ် ရှုံးသလို ၂၀၁၂မှာလည်း အင်အားအသင့်အတင့်နဲ့ စိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားဒဲ့ အန်ဒီအက်ဖ် လက်သစ်၊ လက်ဟောင်း၊ ဦးသုဝေပါတီတွေ ခံစားဂဲ့ရဒယ်။ တိုင်းရင်းသားနယ် မဲအနေအထားလည်း သိပ်အပြောင်းအလဲ မတွေ့ရဘာ။ ၁၉၉၀၊၂၀၁၂ နှစ်ခုစလုံးမှာ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဖြစ်တဲ့ မြို့နယ်များရှိဂဲ့ဒယ်။
အားလုံးခြုံကြည့်ရင် မဲဆန္ဒရှင်အများရဲ့ နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ယုံကြည်ချက် အပြောင်းအလဲ မရှိဒါ တွေ့ရပါမယ်။ ဒါလည်းရှင်းဒယ်.. နိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာ အပြောင်းလဲ ကြီးကြီးမားမားမှ မရှိဒါကိုး..။ ၁၉၈၈ခုနှစ်ကထဲက ခေါင်းဆောင်ဒဲ့လူများပဲ ဆက်လက်ဦးဆောင်နေဆဲ..စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ အပြောင်းအလဲရှိဂဲ့ဒယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီစစ်တပ်ပဲ..။ ဒီဒေါ့ မဲဆန္ဒရှင်အများစု သဘောထား မပြောင်းလဲဒါ သဘာဝကျဒယ်။ အလေးအနက်ပြောဂျင်ဒါ မဲဆန္ဒရှင်များရဲ့ နိုင်ငံရေးရင့်ကြက်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ထားရှိပုံသဘောထားဖြစ်တယ်။ ပိုအရေးကြီးဒါဂ အာဏာပိုင်များရဲ့ ညှစ်အား ညစ်အား၊ အတိုက်အခံများရဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်း နိုင်ငံရေးအသိအမြင်တို့ ဖြစ်ပါဒယ်။
၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ တစညပါတီ မရှုမလှ အရေးနိမ့်သွားပြီးနောက် စစ်တပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် ပြောင်းသွားဒယ်။ တစညပါတီကို စွန့်ခွာလိုက်တယ်။ တစညပါတီအတွင်းလူတဦးဂ စစ်တပ်သူတို့အပေါ် သစ္စာဖောက်တယ်လို့ မကျေမနပ်ပြောတာ ကြားဖူးဒယ်။ သူတို့ကောင်းစားစဉ်ဂ အခုကြံ့ဖွတ်များလိုပဲ ဘဏ္ဍာရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး မျက်နှာသာပေးမှုများစွာ ရဂဲ့ဒယ်။ ဥပမာ ဒင်းတို့ လွှဲပြောင်းယူဂဲ့ဒဲ့ နိုင်ငံပိုင် ပဲခူးခြံတရာ ကန်တရာ စီမံကိန်း၊ အဆောက်အဦး၊ ကား၊ ရံပုံငွေများစွာ အထောက်အထားရှိဒယ်။ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ အန်အယ်လ်ဒီကို တဖက်သတ် ဖိနှိပ်တယ်၊ သတင်းစာထဲမှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ကြော်ငြာအနေနဲ့ မစုနိုင်လျင် ဆင်းရဲမည်ဆိုဒဲ့ ခေါင်းစည်းကြော်ငြာထည့်ဂဲ့ဒယ်။ ပြည်သူလူထု စိတ်ပါလက်ပါ ထောက်ခံတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပေါ်ပေါက်လာမှုနဲ့အတူ အဲဒီတဖက်သတ် ပံ့ပိုးမှုများ ကုန်ဆုံးသွားဒဲ့အခါ တစညခင်ဗျာ ၂၀၁၂ဂျားဖြတ်ပွဲကြတော့ ဟိုးအဝေးဂျီးဂ တတိယတန်းစားပါတီအဆင့်ဂို ရောက်သွားဒယ်။ သူတို့မှာ အရင်အရှိန်နဲ့ ငွေကြေးစုဆောင်းမှု ကျန်သေးလို့သာပေါ့..။ နို့မို့ရင် စတုတ္ထတန်း ထပ်ဆင်းရမယ်။ အဲသလိုပဲ ယနေ့ကြံ့ဖွတ်များနေရာ ကြောင်ဖားရောက်လာရင် သူလည်း ဒီလိုမဲအရေအတွက် ရအုံးမှာပဲ။
သင်ခန်းစာဂဘာလဲ..။ မဲဆန္ဒရှင်တွေထဲမှာ အာဏာပိုင်တွေ မျက်နှာဂိုကြည့်နေသူ၊ ဖိအားတစုံတရာ ရှိဒါနဲ့ ခိုင်းဒါလုပ်ပေးမည့် သန်းဂဏန်းချီဒဲ့လူတွေ ရှိနေဒယ်။ တပ်တွင်းမိသားစု၊ အစိုးရဝန်ထမ်း၊ ဝေးလံခေါင်ဖျား နယ်စပ်ဒေသများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအလွန်အမင်း နိမ့်ကျနေဒဲ့ဒေသများသည် ဒင်းတို့ခြင်းထဲမှ ကြက်များဖြစ်နေဒယ်။ အဲဒီအထဲဂ တဝက်သည် အတိုက်အခံများ လက်လှမ်းမှီနိုင်ပြီး သူတို့ကို ပိတ်ဆို့ထားဒဲ့ အရံအတားများဂို ထိုးဖောက်ရမယ်။ ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် မစည်းရုံးနိုင်တောင်မှ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် အခြေခံအားနည်းသူအုပ်စု အရေအတွက် နည်းသွားအောင် ချဉ်းကပ်ကြရမယ်။ ဒီမိုသမားဖက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ သုံးပုံ တပုံ၊ လေးပုံ တပုံလောက်သာ ပိုပြင်းထန်လာမည့် ဖိနှိပ်မှုများကို ရင်ဆိုင်လိမ့်မယ်။ အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာရင် သူတို့လည်း တာတာ့လုပ်သွားဒါပဲ။ မသမာမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးဂေါက်ပွဲဂို တဖက်စွန်းထား၊ (တနည်းအားဖြင့် စစ်အုပ်စု သူတို့ချထားတဲ့ ဘောင်အတွင်းဂ လုပ်နိုင်တဲ့မိုင်ကုန်ပဲ) မတရားမှုများ အနိမ့်ဆုံးလို့ ပြောနိုင်ဒဲ့ အခြားရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုဂို နောက်အစွန်းတဖက်မှာထား (အဲဒါဂ ပြည်သူများ တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ အားအကုန်ပဲ) .. အဲဒီကြားနှစ်ခုထဲ ဖြစ်နိုင်ဂျေ အမျိုးမျိုးဂို ကိန်းရှင် ကိန်းသေမျယးနဲ့ ပုံဖော်ကြည့်။ နောင်ပွဲဒွေမှာ ကြုံရမည့် ကစားကွက်တွေ မြင်ရမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ဗျူဟာများ ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ပြောပါဒယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာ အပြောင်းအလဲဆိုတာ အချိန်မရွေး ဖြစ်နိုင်ဒယ်လေ။
Political Aspects တွေကို အလွန်နားလည်တဲ့ ဦးကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။
(မိတ်ဆွေများမှာ ပိုမိုတိကျခိုင်မာဒဲ့ အချက်အလက်များရှိဘာဂ
ထောက်ပြဝေဖန် ဆွေးနွေးပေးဂျဘာ။) လို့ ဦးကြောင်ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို
စိန်ခေါ်ပြီး ဝင်ကြမ်းလိုက်ချင်သော်လည်း… ဘာအချက်အလက်မှမသိသောကြောင့်
မိမိကိုယ်ကို Sတုန်းဟု ချစ်စနိုးဆဲလိုက်ပြီး ဦးကြောင် ရေးထားတာလေးတွေကိုသာ
နိုင်ငံရေးကတော့ အမှန်ပဲ လေ့လာပြီး ခြုံငုံသိထားသင့်တဲ့ အရေး ဖြစ်ပေမယ့် နားမထောင်ချင် သိချင်စိတ်မရှိလောက်အောင်ဖြစ်သွားတာ ဘာကြောင့်မှန်းလည်း မသိတော့ပါဘူး အခုတော့ နည်းနည်းပြန်နားစွင့်နေမိတယ်
ပြန်ခဲ့ပါတော့ အူးရယ် အူးရယ်….
အခုဆိုရင် ကြောင်ကထူးကုဆေးခန်း ကြောင်ဟိုတယ် ကြောင် အစားအစာ ဝါးစရာ etc အစုံရှိနေပြီမို့
ယူနီဖောင်းကနေ ချိတ်လုံချည်..ချိတ်လုံခြည်ကနေ ချိတ်စကတ်..အဲသလိုပေါ့
စာလုံးပေါင်းလေးတွေကို မှန်အောင်ရိုက်စေချင်ပါတယ်ရှင့် အခုတော့ မှန်အောင်ပဲစိတ်ထဲကဖတ်သွားပါတယ်
ဇာလေးဂို ဦးကြောင်ခြစ်တယ်ဆိုရင် မှန်သလား မှားသလား ပေါဘာ..။
မှားပါတယ်ချင့် ……. ဘာပြုလို့လဲဆိုရင် ဇာ(စာ)ကလေးနဲ့ ကြောင်ဘ၀ခြင်းမတူ အမျိုးမတူတွေမို့ပါ ချင့် ………. ခစ်ခစ်ခစ် ……..
အတိုက်အခံတွေ ခုထက်ပိုအလုပ်လုပ်သင့်တယ် မြင်မိတယ်။
သူ့ ဘက်တော်သား ခြင်းထဲက ကြက်တွေဘဲ မဟုတ်လား ဦးကြောင်ရေ—-
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောင်ပွဲမှာ နေပြည်တော်လို နေရာမှာ ရှုံးသွားတာ
ရောဂါက သေမလောက် ဖြစ်ခဲ့တာကိုး ကကြောင်ကြီးရဲ့။
ဖြေးဖြေးချင်းတော့ ဆေးတိုးလာမှာပေါ့အေ။ (ဆေးမှန်ခဲ့ရင်ပေါ့ ;-) )
မဲဆန္ဒရှင်တွေထဲမှာ အာဏာပိုင်တွေ မျက်နှာဂိုကြည့်နေသူ၊ ဖိအားတစုံတရာ ရှိဒါနဲ့ ခိုင်းဒါလုပ်ပေးမည့် သန်းဂဏန်းချီဒဲ့လူတွေ ရှိနေဒယ်
အရမ်းကို မြင်သာတဲ့ အချက်ပါဗျာ.. နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်သွားတာတောင် ကျန်နေဆဲပဲနော်..
အတိုက်အခံတွေ အဲဒါကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ.. အဲဒိ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် အခြေခံအားနည်းသူအုပ်စုကို ဘယ်လို ချဉ်းကပ်မလဲ စည်းရုံးမလဲ စဉ်းစားထားဖို့လိုမယ်
တရုတ်ဆေးမတိုးရင် ဗိန္ဒောနဲ့ ကုကြည့်ပါလား ဦးကြောင်
ယခု ကျဉ်းဖွဇွတ်လုပ်ခဲ့သော ရွေးဂေါက်ပွဲ အခြေအနေလေ့လာချက်များအရ… ချဉ်ဖတ်ပါတီများပေါ်လာသောအခါ.. အမြင်ကတ်ပြည်သူလူထုသည်… အကန်ခတ်ပါတီများသို့ အားတက်သရောမဲပေးလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်.. သို့ဖြစ်ပါရွေ့.. နောင်လာမည့် ရွေးဂေါက်ပွဲတွင် ကျွန်ုပ် မောင်ဆိုးကြီးသည် ဘောလုံး အမှတ်တံဆိပ်ပါ ပါတီအားထူထောင်ရွေ့.. ရွေးဂေါက်ပွဲဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်.. ( ကန်ယင်း ခတ်ယင်း အမြင့်ရောက်ရွေ့ ဘ၀င် မြောက်မည့်အရေးစိတ်ပူရန်မလို [ဖစ်ကို ဖစ်မည်] ဆိုသည့်အကြောင်း) သတင်းဂေါင်း ပါးအပ်ပါသည်..